Airbrush Nhanho nedanho ndiyo magazini kune ese airbrush artists: kubva pavatanga kusvika padanho repamberi, kubva pamhando yekutanga airbrusher kuenda kumuvaki wemuenzaniso, muviri uye mutengi kududzira kune nyanzvi yekuenzanisira.
Airbrush Nhanho nedanho inoitirwa kune vese avo vanofarira ezvekuita airbrush misoro uye vanoda kuvandudza hunyanzvi hwavo hwebrashi kuburikidza nekugadzira matipi emushandisi uye ruzivo rwekutanga.
Airbrush Nhanho nedanho inopa nhanho-nhanho mirairo yemifananidzo yebrashi pamazinga akasiyana ekuoma. Inopa ruzivo rwekutanga uye mazano ehunyanzvi, inopa zvigadzirwa zvazvazvino uye nazvino matekinoroji uye inopa nhau uye mishumo panhau yeibhurasho nemuenzaniso.
Airbrush Nhanho nedanho inokomberedza yakawandisa, inoshanda uye yekugadzira kuratidzwa kwezvinhu: inodzidzisa nheyo dzakatevedzana, kugadzira-kwemishumo, kubvunzurudza kwevatambi uye maporodha, zviratidziro zvechigadzirwa nemiedzo pamwe nechiitiko chazvino uye mishumo inoshanda inokukoka kuti uverenge, uongorore, uongorore uye unganidza kabhuku aka.
Kutanga nechinyorwa chitsva 01/19, chinyorwa chemutauro weChirungu cheAirbrush Chikamu nemagazini yeState chichave zvakare chiri kutengeswa muzvitoro zvebhuku nemapepanhau munyika nomwe, zvinoti kuUSA, United Kingdom, Spain, Portugal, Brazil, Canada neAustralia. . Airbrush Nhanho neStepanhau magazini rave richishambadzirwa mumutauro weChirungu kwemakore gumi nematatu. Kusvika parizvino, makopi ave kutengeswa chete kuma airbrush supply zvitoro, kuburikidza nekunyorera pamwe ne-on-line.
Nekuda kwekuti kugoverwa kune dzimwe nyika kuchange kuchangamirwa kubva kuUK, mutengo wekukopi uri pabutiro unoratidza 6,99 GBP. Kudhindisa nekudhinda kuchiri "kugadzirwa kuGerman". Chikwata cheASBS chinonyanya kudada kuti magazini iyi inge ichiwanikwa kuBarnes & Noble mabhuku zvitoro muUS. Iyo US kopi mutengo ichave iri 12,99 USD.
Nekuda kwemwaka wehoridhe, kutumira kwenyika dzese nyaya ichangotanga munaNdira, saka zvinogona kutora kusvika Kukadzi kusvika magazini ichinge yasvika kuzvitoro munyika zvataurwa. Zvimwezve zvinodiwa pazvitoro chaizvo nevatengesi zvichave zviripo pakati paNdira.
Hakuna hukama hwakanangana.